ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်း၏ သော့ချက် | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 29/03/2013
အမင်္ဂလာကို မင်္ဂလာဖြစ်စေသော အီစတာအခါသမယ၌ ကျွန်ုပ်တို့ အားဖြင့် လူသား များစွာကို သင်္ခါရမှ ထာဝရသို့ မင်္ဂလာ ဖြစ်စေရန် ဘုရားသခင် ကောင်းချီး ပေးပါစေဟု ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သအပ်ပါသည်။
သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်း၏ သော့ချက် ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ၌ ယုံကြည်သူများသည် အလေး အနက်ပင် မထားကြတော့ပေ။ အချို့သော ဓမ္မဆရာကြီး များပင်လျှင် သခင်ယေရှု၏ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို သံသယ ရှိလာ ကြပါသည်။
ဤကား အံ့သြစရာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုက မိမိ ထမြောက်မည့်အကြောင်းကို ပြောသောအခါ အနီးကပ် တပည့်တော်များက အလေးအနက်မထား၊ မယုံကြည် ကြသော်လည်း (မဿဲ ၂၀း၁၇-၁၉) သခင် ဘုရားကို ဆန့်ကျင်၍ အသေသတ်ခဲ့သော ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ဖာရိရှဲများက သခင်ဘုရား၏ တပည့်တော်များထက် ထိုထမြောက်ခြင်းကို အလေးအနက် ထားပြီး ယုံကြည်ခဲ့ ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရှင်ပြန် ထမြောက်မည်ဟူသော သခင်ဘုရား၏ စကားတော်ကြောင့် သခင်ဘုရား အသက်ရှင်စဉ်က ကြောက်ရွံ့သည်ထက် သခင်ဘုရား အသေခံတော် မူပြီးနောက် ပို၍ ကြောက်ရွံ့ကာ အလောင်းတော်ကို သင်္ချိုင်းထဲတွင် လုံလုံခြုံခြုံ ရှိစေရန် ပိုမို ဂရုစိုက်ကာ အစောင့် အကြပ်များ ထူထဲစွာ ချထားခြင်း စသည်ဖြင့် အဖက်ဖက်မှ ကြိုတင် ကာကွယ် ပြင်ဆင် ခဲ့ကြပါသည်။
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ဖာရိရှဲများ သဘော မပေါက်သော အချက် တစ်ချက်ကား မည်မျှ ကြီးမားသော ကျောက်တုံး၊ ရောမ အစိုးရ၏ တံဆိပ်တော်၊ ရောမ စစ်သားများ၏ စောင့်ကြပ်မှု စသည်တို့က ဘုရားသခင်၏ သားတော် သခင် ယေရှု၏ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို မဟန့်တားနိုင် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထမြောက်ပြီ ရန်သူများပေါ်ဘုန်းကြီး အောင်မြင်ပြီ နက်နဲရာထဲက အောင်မြင်လျက်တက်ကြွလာ
သန့်ရှင်းသူနှင့်စိုးစံ သက်ရှင်ထာဝရ ထမြောက်ပြီ ထမြောက်ပြီ ဟာလေလုယာ ထမြောက်ပြီ””
ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ယခုတိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ အောင်မြင်စွာ သီဆို နိုင်ခဲ့ကြ ပါသည်။
ထမြောက်ခြင်းဖြင့် ခံစားရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ
သခင်ဘုရား၏ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အောက်ပါ အချက်များကို သိရှိစေရုံမက ယုံကြည် လိုက်နာခြင်း အားဖြင့် အကျိုးဆက် များကို ဆက်၍ ခံစားစေနိုင် ခဲ့ပါသည်။
သခင်ဘုရား၏ ပသခါ ညစာ စားပွဲသည် သခင်ဘုရား ကြွလာ သည့်တိုင်အောင် ပြုရသည့် ပွဲတော် မင်္ဂလာ အဖြစ်သို့ ပြောင်း သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်တို့သည် ထိုမုန့်ကို စား၍ ထိုခွက်ကို သောက်သည့် အခါခါ သခင်ဘုရား အသေခံ တော်မူခြင်းကို ကြွလာတော် မမူမီ တိုင်အောင် ပြကြ၏ (၁ကော ၁၁း၂၆)။
သတ္တမနေ့ စည်းဝေးခြင်းမှ ပထမ နေ့စည်း ဝေးခြင်း
သတ္တမနေ့ စည်းဝေးခြင်းမှ ပထမ နေ့စည်း ဝေးခြင်းသို့ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။
ခုနစ်ရက်တွင် ပထနေ့၌ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်းငှါ စည်းဝေးကြသောအခါ ပေါလုသည် နက်ဖြန်နေ့၌ ထွက်သွားမည် ဖြစ်၍ သန်းခေါင် တိုင်အောင် ဟောပြောလျက် နေလေ၏(တ ၂၀း၇)။
ဤကား ပညတ်တော်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း မဟုတ်၊ ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းထဲ၌လည်း ပထမနေ့ကို ဥပုသ်နေ့၊ စည်းဝေးရာနေ့အဖြစ် ဖေါ်ပြထားခြင်းကို ဓမ္မ သစ်ခေတ်တွင် ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမနေ့ ၌၎င်းင်း၊ ခုနစ်ရက် နေ့၌၎င်း၊ ဓမ္မ စည်းဝေးခြင်းကို ပြုရမည်။ ထိုနေ့ရက်၌ စားခြင်း ကိစ္စနှင့် ဆိုင်သော အလုပ် အဆောင်မှ တစ်ပါး အခြားသောအလုပ်ကို မလုပ်မဆောင်ရ။ (ထွက် ၁၂း၁၆)။
သင်တို့သည် သတ္တမလ၊ ပထမနေ့ရက် ၌ တံပိုးမှုတ်ပွဲ၊ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကို ပြုရသော ဥပုသ်နေ့ကို စောင့်ရကြမည်။ လောကီ အလုပ်ကို မလုပ်ရ(၀တ် ၂၃း၂၄)။
ပဋိညာဉ် တရားဟောင်းမှ ပဋိညာဉ် တရားသစ်
ပဋိညာဉ် တရားဟောင်း (ပညတ်တရား)မှ ပဋိညာဉ် တရားသစ် (ကျေးဇူးတရား)သို့ ပြောင်းလဲပေး ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်၏ အသွေးတော် အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူး (ပဋိညာဉ် တရားသစ်)ကို ခံစားရခြင်း (၂ကော ၅း၁၇)။
ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း ခံရပြီး အာဗြဟံ ခံရသော ကောင်းချီး မင်္ဂလာကို ခံစားရသူများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း (ဂလာ ၃း၁၃-၁၄)။
မောရှေ၏ တရားအတိုင်း မလွတ်နိုင်သော အပြစ် ရှိသမျှနှင့် လွတ်ခြင်း အခွင့်ကို ရရှိခြင်း (တ ၁၃း၃၉)။
ထိုရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို ကြီးသော တန်ခိုးနှင့် သက်သေခံခြင်း အားဖြင့် ကြီးသော ကျေးဇူးတော်နှင့် ပြည့်ဝခြင်းကို ခံစားရ ရှိခြင်း(တ ၄း၃၃)။
သေခြင်း တည်းဟူသော မာရ်နတ်၏ တန်ခိုးကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ ၎င်း၊ သေဘေးကို ကြောက်၍ တစ်သက်လုံး ကျွန်ခံရခြင်းမှ လွတ် မြောက်ခြင်း (ဟေဗြဲ ၂း၁၅)။
ထမြောက်ခြင်းသည် သတင်းကောင်း၏ အခြေခံအချက်
ခရစ်တော် ရှင်ပြန် ထမြောက်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရှင်ပြန် ထမြောက် ကြမည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲပင် ဖြစ်သည်။ (ယော ၁၁း၂၅)။ သေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူ များအတွက် ခရီးဆုံး မဟုတ်သေးပါ။ ထာဝရ ကာလအတွက် ၀င်ခွင့် (ဗီဇာ)ပင် ဖြစ်သည်။
သခင် ခရစ်တော်ကို အသက် ပြန်ရှင် စေခဲ့သော တန်ခိုးတော်သည် အသင်းတော်က ကမ္ဘာ လောကကြီးအား သက်သေခံရသော အ ကောင်းဆုံးနှင့် အမွန်မြတ်ဆုံး သတင်းကောင်း၏ အခြေခံ အချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ငါသည် ကိုယ်တိုင် ခံယူသည့်အတိုင်း သင်တို့အား ရှေးဦးစွာ အပ်ပေးသော အကြောင်းအရာ ဟူမူကား ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာ လာသည်အတိုင်း ငါတို့ အပြစ်ကြောင့် အသေခံ တော်မူ၏။ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ ကျမ်းစာလာသည့် အတိုင်း သုံးရက် မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက် တော်မူ၏ (၁ကော၁၅း၃-၄)။
သခင် ခရစ်တော်၏ အသေခံ တော်မူခြင်းသည် သာမန် သေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဘယ်ပုဂ်္ဂိုလ်၊ ဘယ်လူသား ကမျှ မအောင်မြင်သော သေခြင်းမှ ထမြောက် ရှင်ပြန်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမင်္ဂလာမှ မင်္ဂလာ များစွာကို ဖြစ်စေ၍ ပြောင်းလဲမှု များစွာကို ဖြစ်စေသော သခင်အား အောက်မေ့ သတိရရုံမက ထိုသတင်းကောင်းကို ကြီးစွာသော တန်ခိုးနှင့် ဝေငှခြင်းအားဖြင့် ထာဝရ အသက်တာကို ရှာနေကြပြီး အချည်းနှီးအချိန်၊ ငွေ၊ စွမ်းအား များကို အကုန်ခံနေသည့် သူများ၊ ထို အချည်းနှီးသော အမှုများမှ လွတ်မြောက်၍ ထာဝရ အသက် ကောင်းချီး မင်္ဂလာကို ခံစားရရှိစေရန် အစွမ်းသတိ်္တရှိသမျှ၊ ဉဏ်ရှိသမျှ၊ ခွန်အား ရှိသမျှဖြင့် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ကြပါစို့..။
← နိမိတ်လက္ခဏာ ခံစားရန် ဆန္ဒပြင်းသော နေမန်
ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်တဲ့ အာဗြဟံ →
3 comments on “ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်း၏ သော့ချက်”
SAPPHIRE KHAW . on 30/03/2013 at 1:04 AM said:
VERY NICE EASTER SAYA THANK U N GBU .
sailin on 31/08/2013 at 3:15 PM said:
ဆ၇ာ နေကောင်း ပါစေ….ဆ၇ာ ဧ၀ံကေလိုဆိုတာ ဘာ လဲ…ဘယ်လိုမျိူး နဲ့ ဘယ် မှာ လုပ်ဆောင်၇မလဲ အတိုချူပ် သိချင်ပါတယ် …ကျေးဇူးအများ ကြီးတင် ပါတယ်
myosattit3 on 24/08/2013 at 9:35 AM said: